“Afar Arrimood Dartood Ayay Somaliland Ugu Guuldaraysatay Inay Aqoosni Dhaafsato Heshiisyadii Dekedda iyo Saldhiga”Cabdikariin Axmed Mooge.
Carabi markii ugu horaysay ee dani ka soo gasho Somaliland waxay ahayd ka dib markii dawlada imaaraadku danaysay in ay maamusho Dekada Barbera “Somaliland Deeq” iyo in ay saldhig-Milateri ka samaysato Airportka Barbera, iyaga oo xiligii adkaa/1988 ummadan dabada u jeediyay oo waliba tageeray kalitaliyihii ummadan xasuuqay.
Walow ay ahayeen cadow hadana rabitaankoodu wuxuu ahaa fursad Somaliland hor timi oo ay kaga dalban karaysay aqoonsi toos ah ama mid-dadban oo ahaa waxa ugu weyn ee Somaliland ka maqan maanta, waxaana loo sibir-saara in ay Somaliland ku guul daraysatey in ay aqoon dhaafsato heshiisyadan muhiimka u ahaa imaaraadka afar arimood oo ay ka midyihiin
1. In kooxda u matalaysay wadahadalada Somaliland anay ahayn koox u diyaarsan sida loo galo doodaha ku saabsan sida qaramadu isu dhaafsadaan danaha ee qolo waliba danteeda u marsato qoloda kale
2. Xaqul-qalinka oo ahaa waxa ugu weyn ee dabada ka riixayay in si degdeg ah oo aan ka fiirsi iyo baarandegtoona lahayn loo saxiiso heshiiska. Carabtu waxay ku caan yihiin in ay ku meel marsadaan danahooda lacagta faraha badan ee ay haystaan waxaanad mooda in ay danahooda ka iibsadeen Somaliland taas oo ay daliil u tahay dhameelkii barlamaanka lagu daadiyay si ay u tageraan duduubna ugu ansixiyaan heshiiska iyaga oo aan arag nuqulka rasmiga ah!
3. In xubno awood badan ku leh Somaliland ay dabada ka riixayeen in heshiiska la saxeexo si degdeg ah iyada oo anay wali soo shaac bixin danaha qarsoon ee ay ka lahayeen dadajinta heshiiska.
4. Iyo markii ay meesha ka baxeen Mohamed Bihi iyo Hirsi oo iyagu rabay bal in la eego cidaha kale ee iyaguna danaynaaya in ay maalgashadaan Berbara sida shirkad laga lahaa wadanka faransiiska iyo Ruushka oo isna soo eegayay bal siday suuro gal ugu tahay in uu mar labaad ku soo noqdo saldhigiisi hore ee dhulkii laysku odhan jiray Soomaaliya
Mar kale ayay carabi soo noqotay iyaga oo doonaya in ay Somaliland xidhiidhka u jarto wadanka Qadar, xidhiidh aan marka horeba jirin! marka laga tago in hayado Qadari ahi xooga mashaariic ah ka wadaan Somaliland iyo in tiro badan oo muwaadiniin reer Somaliland ahi ka shaqeeyaan Qadar, Waxay ahayd fursad labaad oo aan laga faa’idaysan waayo waxay ahayd in ay ku doodaan waar aan xidhiidhka aanu u jarnee horta mashaariicda ay hayadaha Qadariga ahi ka wadaan Somaliland idinku ma sii wadaysaan?
Dadkayaga ka shaqeeya Qadarna hadii la soo eryo ka dib marka aan idinla safano shaqooyin ma noo siinaysaan? Sidoo kale dee markayaga hore ayaan go’doon iskaga jirnaaye horta si uun noo aqoonsada oo noo fura albaabada!! Iyana iyada oo aan wax badan la dhaafsan ayaa golaha wasiirada ee gacan-taaga yaqaana u codeeyeen in xidhiidhka loo jaro Qadar iyada oo aan la qiimayn waxa inagu soo gaadhi kara go’aan nocaas ah oo aan qaadano!! Xitaa kamay fikirin dhalinyarada faraha badan ee reer Somaliland ee halkaas ka shaqeeya waxa ku soo gaadhi kara go’aanka ay qataan!
Waxay ahayd bishii maarso 19keedi sanadkan markii heshiiskan ay Imaaraadku aadka u danaynayeen qalinka lagu duugay. Ilaa maanta imaaraadku may ogolaan in lagu tago wadankooda baasaboorka Somaliland, markaad eegto mudada ay ku qaadanayso in ay qof reer Somaliland ah, hada waa hal qof wadankooda booqdo si uu uga soo muraadsado ee aad barbardhigto mudada ay ku heleen in ay ina marsadaan danahooda waxa ku soo baxaya in wax qaldanyihiin!!!